ERP (Enterprise Resource Planning system) | Global Connect Asia
စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်ပီဆိုရင် ERP(Enterprise Resource Planning) ဆိုတာဘာလဲသိဖို့လိုလာပါပီ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း နဲ့အသေးဆုံး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေက အများဆုံးဖြစ်ပါသည်။ အဲဒီလုပ်ငန်းတွေမှာ On paper နဲ ့အလုပ်လုပ်သည့်အခါ အချိန်ကြာတာတွေ၊ စာရင်း လွဲမှားတာတွေရှိတတ်တော့
အချိန်ကုန်သက်သာပြီး တိကျမှန်ကန်တဲ့ ERP system ကိုသုံးဖို့စဉ်းစားလာကြပါတယ်။ ဆိုတော့ ERP ဆိုတာ ဘာလဲ ? ဘယ်လိုတွေ အသုံးဝင်လဲ ဆိုတာ အရင်ဆုံးသိဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။
ERP ထဲမှာ ဘာတွေရှိလဲ ဆိုရင် CRM (Customer Relationship Management), Website/e-Commerce,
Billing(ငွေတောင်းခံခြင်း), Accounting(စာရင်းကိုင်), Manufacturing(ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်း), Warehouse, Project Management(စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲခြင်း) တို့ဖြစ်ပါတယ် ။
Odoo ERP (Odoo Enterprise Resource Planning system)ဟာ ဒါတွေအားလုံးကို All in One ဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် တိတိကျကျ နဲ့ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ် ။ All in One ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ ?
အလွယ်ဆုံးပြောရရင် Manufacturing ကနေ Product တစ်ခု ထုတ်လုပ်တယ် ၊ ပြီးတော့ Sale Management ကနေ ရောင်းတယ် ၊ ရသမျှ Amount နဲ့ Profit ကို Accounting ကနေ ထိန်းသိမ်းရတယ် ။
Odoo ERP ဟာ Manufacturing , Sale Management , နဲ့ Accounting ဆိုတဲ့ ဒီဖြစ်စဉ် သုံးခု လုံးကို ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အတွက် တစ်ကြိမ်တစ်ခါပဲ Manage လုပ်စရာလိုမယ် ။ ဒါဟာ Odoo ERP (Odoo Enterprise Resource Planning system) သုံးရခြင်းရဲ့အားသာချက်ပါပဲ။
ဒီ features တွေအကုန်လုံး Odoo ERP (Odoo Enterprise Resource Planning system) စနစ်တစ်ခုတည်းမှာ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အတွက် Processes တွေကိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Odoo ERP စနစ်တစ်ခုလုံးကို Cloud ပေါ်မှာ
တည်ဆောက်ထားတဲ့အတွက် အခြားကုန်ကျစရိတ်တွေ လျော့ချနိုင်တယ် ၊ နောက်ထပ် ဘယ် Software / Hardware ကိုမှ ထပ်မံ install လုပ်စရာ မလိုဘဲ internet ရတဲ့မည်သည့်နေရာမဆို
အလွယ်တကူ ကြည့်ရှု့စစ်ဆေးနိုင်မဲ့အပြင် အခြားသော လုပ်ဆောင်ချက်များစွာ ရှိနေပါသေးတယ် ၊ အသေးစိတ်ကိုတော့ နောက်လာမယ့် posts တွေမှာ လေ့လာဖတ်ရှု့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
လူကြီးမင်းက manufacturing တွေ ဒါမှမဟုတ် distribution လုပ်ငန်းတွေကို ဦးဆောင်နေတဲ့ Business Owner တစ်ယောက်သာ ဖြစ်မယ်ဆိုရင်
Odoo ERP(Odoo Enterprise Resource Planning system) ဟာလည်း လူကြီးမင်းရဲ့ ပြိုင်ပွဲကို အချိန်တိုတိုနဲ့စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မယ့် Key တစ်ချောင်းပါပဲ။
လူကြီးမင်းတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်အတွက် ERP System အသုံးပြုလိုသူများ၊ စိတ်ဝင်စားသူများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ Global Connect Asia Co., Ltd. မှ အထူးဝန်ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်ပေးနေပြီဖြစ်ပါသည်။